दिमाग तिखो बनाउन चाहनुहुन्छ ? खानुहोस् यस्ता खानेकुरा - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»दिमाग तिखो बनाउन चाहनुहुन्छ ? खानुहोस् यस्ता खानेकुरा
दिमाग तिखो बनाउन चाहनुहुन्छ ? खानुहोस् यस्ता खानेकुरा
By रिता घिसिंग on २९ पुष २०७४, शनिबार ०६:४३ स्वास्थ्य/जीवनशैली
एजेन्सी : स्वस्थ जीवनका लागि मस्तिष्क स्वस्थ हुनु आवश्यक हुन्छ । दिमाग तेज बनाउनका लागि केही विशेष आहारहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । उमेर बढ्दै जाँदा दिमागका कोशिकाहरू नष्ट हुँदै जान्छन् र स्मरणशक्तिमा ह्रास आउँछ । तर ब्रेन फूड खानुभयो भने दिमागलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ । यी हुन् दिमाग तीखो बनाउने खानेकुराहरू :
दिनदिनै एक मुट्ठी ओखर खानुभयो भने दिमागका नसाहरू तेज हुन्छन् ।
पालुंगोमा भएको प्राकृतिक एन्टीअक्सिडेन्ट गुणले शरीरलाई धेरै लाभ दिन्छ । यसमा भएको आइरन र म्याग्नेसियमले स्मरणशक्ति बढाउँछ र रगतलाई दिमाग तथा शरीरका अन्य अंगसम्म पु–याउँछ ।
आलसको बिउमा फाइबर र प्रोटीन भरपूर हुन्छ । आलसका बिउलाई दहीमा हालेर खाँदा दिमाग तीखो हुन्छ ।
गोलभेंडा सलादका रूपमा खानुभयो भने दिमागलाई धेरै फाइदा गर्छ । यसमा भएको लाइकोपीन एन्टीअक्सिडेन्टले शरीरलाई –याडिकल कणहरूबाट रक्षा गर्छ । मस्तिष्कका कोशिकाहरूलाई यसले सुरक्षित बनाउँछ ।
हरियो तरकारी भरपूर मात्रामा पोषक तत्त्वहरू हुन्छन् । यिनले दिमागमा खराब असर गर्ने टक्सिनबाट बचाउँछन् । गाजर, बन्दाकोभी, काउली र सिमीहरूमा एन्टीअक्सिडेन्ट गुण हुन्छन् जसले दिमागलाई राम्रो बनाउँछन् ।
दहीमा अमिनो एसिड हुनाले स्मरणशक्ति बढ्छ । यसले तनाव पनि भगाउँछ । दहीमा ड्राई फ्रुट हालेर खाँदा धेरै फाइदा पुग्छ ।त्यस्तै ब्लुबेरी, केरा, चकलेट, फर्सीको बियाँ, जैतून तेल र साबुत अनाजले पनि दिमाग तीखो बनाउँछन् ।
२१ चैत्र २०७४, बुधबार ०८:३७ 0
रात्रि गस्तीमा खटिएका प्रहरीमाथि खुकुरी प्रहार
२४ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०३:०७ 0
मोटरसाइकल दुर्घटनामा पौडेलको मृत्यु